I-Bhanki yase China ibhengeza ukuba zonke izivumelwano ze-crypto azikho semthethweni, i-Bitcoin yengozi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase China eziQhekezayo » I-Bhanki yase China ibhengeza ukuba zonke izivumelwano ze-crypto azikho semthethweni, i-Bitcoin yengozi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase China eziQhekezayo • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukutshintshiselana kwemali yaphesheya kwezilwandle esebenzisa i-intanethi ukubonelela ngeenkonzo kubahlali basekhaya ikwaqwalaselwa njengemali engekho mthethweni.
Amaziko emali kunye namaziko angahlawuliyo ebhanki awanakho ukubonelela ngeenkonzo kwimisebenzi nakwimisebenzi enxulumene nemali ebonakalayo.
I-asethi yedijithali yenani elinye lehlabathi ngentengo yemarike yehle ngaphezulu kwe-5% ukuya ngaphantsi kwe- $ 42,000.
Ezinye i-cryptocurrencies zilandele imeko eyehlayo xa i-ether yehla nge-10% ukuya ngaphantsi kwe- $ 2,800, ngelixa i-dogecoin yaphahlazeka ngaphezulu kwe-8% ukuya ngaphantsi kwe- $ 0.20.
IBhanki Yabantu yase China ibhengeze izicwangciso zokuthintela amaziko ezemali, iinkampani zemali kunye namashishini e-intanethi ekuququzeleleni urhwebo lwe-cryptocurrency, kunye nokomeleza ukubekwa kweliso emngciphekweni kwimisebenzi yeshishini lokugcina imali.
UMFANEKISO WEFAYILE: Umfuziselo omncinci wokudlala ubonakala kwimelo ye-Bitcoin yemali ebonakalayo eboniswe phambi komfanekiso weflegi yase China kulo mfanekiso, ngo-Epreli 9, 2019.
Isilawuli saseTshayina siphindaphinde ukuma kwaso ngokungqongqo kwimali yedijithali namhlanje, sibhengeza yonke imisebenzi yokurhweba ngemali engeyiyo ngokungekho semthethweni kunye nokuthintela ukutshintshiselana nge-crypto phesheya ekunikezeleni ngeenkonzo kubatyali mali baseTshayina.
Utshintshiselwano lwemali lwaphesheya olusebenzisa i-intanethi ukubonelela ngeenkonzo kubahlali basekhaya luthathwa njengemali engekho mthethweni Ibhanki yabantu base China ithunyelwe kwiwebhusayithi yayo.
"Amaziko ezezimali kunye namaziko angahlawuliyo ebhanki awanako ukubonelela ngeenkonzo kwimisebenzi nakwimisebenzi enxulumene nemali ebonakalayo," yatsho ibhanki enkulu.
Intshukumo yathumela i-bitcoin kunye nezinye iimali ezibonakalayo ezantsi. Inombolo yokuqala yempahla yedijithali ngoqoqosho kwimakethi, Bitcoin, yehle ngaphezulu kwe-5% ukuya ngaphantsi kwe- $ 42,000. Ezinye i-cryptocurrensets zilandele imeko eyehlayo xa i-ether yehla nge-10% ukuya ngaphantsi kwe- $ 2,800, ngelixa i-dogecoin yaphahlazeka ngaphezulu kwe-8% ukuya ngaphantsi kwe- $ 0.20, ngokwewebhusayithi yeCoinmarketcap.
Isigqibo samva nje siza njengenxalenye yomkhankaso oqhutywa ngurhulumente ngokubanzi ngabalawuli baseTshayina ngokuchasene ne-cryptocurrensets. Kwangoko kulo nyaka, iBeijing yathintela ukumbiwa kwemigodi kwiindawo ezinkulu ze-bitcoin, ezinje ngeSichuan, iXinjiang kunye ne-Inner Mongolia, ekhokelele ekunciphiseni ngamandla ekusebenzeni kwe-bitcoin, njengoko abasebenzi basezimayini abaninzi bazithathela izixhobo zabo ngaphandle kweintanethi.